DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA AMD RADEON HD 6700 SERIES - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ma wụnye onye ọkwọ ụgbọ ala maka AMD Radeon HD 6700 Series
Ihe nchọgharị weebụ nke Opera bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na ụwa ma kesaa n'efu. Ndị ọrụ ụfọdụ nwere ajụjụ na usoro nhazi nke ihe nbudatara na kọmputa. N'isiokwu a, anyị ga-agbalịa nyochaa isiokwu a n'ụzọ zuru oke ma kwee ntụziaka ndị dị mkpa ga-enyere gị aka ịwụnye Opera na PC gị.
Wụnye Opera nchọgharị na kọmputa gị maka n'efu
Na ngụkọta, e nwere ụzọ ntinye nrụnye ga-arụ ọrụ n'ọnọdụ dị iche iche. Anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị na nhọrọ niile, họrọ nke kachasị mma maka onwe gị, na mgbe ahụ ịmalite iji mmezi nke akwụkwọ ntuziaka ahụ. Ka anyị lebakwuo anya na ụzọ niile.
Usoro 1: Onye ọrụ nchịkwa
A na-arụ ọrụ nchọgharị nchọgharị na PC site na iji ngwanrọ nke nwere ike inweta faịlụ ndị dị mkpa na Ịntanetị ma na-azọpụta ha na mgbasa ozi. Ntinye site na usoro a bu dika:
Gaa na weebụsaịtị Opera
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ Opera na ọrụ njikọ dị n'elu ma ọ bụ tinye arịrịọ na ihe nchọgharị ọ bụla.
Ị ga-ahụ bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ "Download ugbu a". Pịa ya iji malite nbudata.
Mepee faịlụ ebudatara site na ihe nchọgharị ma ọ bụ nchekwa ebe a na-echekwa ya.
Anyị na-akwado ka ị banye ozugbo na ntọala ahụ.
Họrọ asụsụ ogbi nke ị ga-eji arụ ọrụ nke ọma.
Chọpụta ndị ọrụ nke ihe nchọgharị ahụ ga-arụnyere.
Kọwaa ebe ịchekwa usoro ahụ ma tinye igbe nlele ndị dị mkpa.
Pịa bọtịnụ ahụ "Nabata ma wụnye".
Chere maka nbudata na nbudata. Emechila windo a ma ọ bụ malitegharịa kọmputa ahụ.
Ugbu a, ị nwere ike ịmalite Opera ma gaa ogologo iji rụọ ọrụ na ya. Otú ọ dị, anyị na-ebu ụzọ nyefee ịnyefe ozi niile dị mkpa n'ebe ahụ ma gbanwee maka mmekọrịta dị mma karị. Gụ banyere nke a na isiokwu ndị ọzọ anyị na njikọ n'okpuru ebe a.
Opera nchọgharị na mmekọrịta
Nzọụkwụ 2: Nwepụta ngwugwu arụmọrụ
Ntinye site na ngwanrọ pụrụ iche site n'aka ndị mmepe adịghị mma mgbe niile, ebe ọ bụ na ebudatara faịlụ niile na netwọk, n'otu aka ahụ, nrụnye nwere ike ime naanị mgbe ejiri ya na Ịntanetị. Enwere ngwugwu nrụnye nke na-enye gị ohere ịrụ usoro a n'oge ọ bụla n'enweghị njikọ Ịntanetị. Ọ dị arọ dị ka nke a:
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti nke onye mmepụta ihe nchọgharị.
Pịgharịa gaa na ibe ahụ, chọta ngalaba n'ebe ahụ. "Download Opera" ma họrọ ihe Nchọgharị Kọmputa.
N'okpuru bọtịnụ ahụ "Download ugbu a" chọta ma pịa akara "Gbaa ngwà ngwugwu".
Mgbe ahụ, mgbe ọ dị mkpa, na-agba faịlụ a, gbanwee ogige nwụnye wee pịa "Nabata ma wụnye".
Chere ruo mgbe arụnyere ihe nchọgharị weebụ na kọmputa gị ma ị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ ya ozugbo.
Usoro 3: Reinstall
Mgbe ụfọdụ ịkwesịrị ịdegharịa ihe nchọgharị ahụ. Iji mee nke a, ọ dịghị mkpa ka ihichapụ ya na nbudata ọzọ. Opera nwere ihe pụrụ iche nke na-enye gị ohere ime usoro a ozugbo. A na-eme nke a dị ka ndị a:
Meghee "Ogwe njikwa" ma gaa na ngalaba "Mmemme na Ngwa".
Na ndepụta software, chọta akara "Opera" ma pịa bọtịnụ akaekpe aka ya abụọ.
Họrọ ihe "Reinstall".
Ugbu a, ị ghaghị ichere ruo mgbe ebudara faịlụ ọhụrụ ma nwee ike iji ihe nchọgharị ahụ ọzọ.
Melite Opera nchọgharị na mbipute ọhụrụ
Melite Opera nchọgharị: nsogbu na ngwọta
Na nke a, isiokwu anyị na-abịa na njedebe. N'ime ya, ị mụtara banyere nhọrọ niile dịnụ iji wụnye nchọgharị Opera na PC. Dị ka ị nwere ike ịhụ, ọ dịghị ihe dị mgbagwoju anya na nke a; naanị ị ga-eme ihe ọ bụla n'ime ya ma mezie usoro ahụ nke ọma. Ọ bụrụ na ị hụ nsogbu ọ bụla ma ọ bụ njehie n'oge nrụnye, ṅaa ntị na isiokwu anyị na njikọ dị n'okpuru, ọ ga-enyere aka dozie ya.
Gụkwuo: Nsogbu site na ịwụnye ihe nchọgharị Opera: ihe na ngwọta